न्यूज सञ्जाल: » ठेकेदारले किन रोके खोलामा पस्ने गाडी ?
ठेकेदारले किन रोके खोलामा पस्ने गाडी ?
न्यूज सञ्जाल १७ माघ २०७५, बिहीबार १५:३६
झापा । आफूहरुले पाएको ठेक्काअनुसार स्थानीय बिरीङ नदीबाट नदीजन्य सागग्रीहरु उत्खनन् गर्न नपाएको भन्दै सम्बन्धित ठेकेदारहरुले बिहीबारदेखि सबै ढुवानीका लागि आउने सवारीसाधनलाई रोक लगाएका छन् ।
स्थानीय सरकारसँग भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार नदीजन्य सामग्री संकलन तथा उत्खनन् गर्दा स्थानीय आन्दोलित भएपछि उनीहरुले अर्जुनधारा नगरपालिकाले वातावरण तयार नगरुञ्जेलसम्म अनिश्चितकालीन रोक लगाएको पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएका हुन् ।
उनीहरुले आन्दोलन सार्वजनिक गर्दै नदीजन्य सामग्री ढुवानीका लागि सम्पूर्ण सवारीसाधनलाई नदीमा प्रवेश निषेध गर्ने तथा निकासी कर पनि नलिने घोषणा गरे ।
सम्झौताअनुसारको कार्य गर्न अनुमति पाए पनि उत्खनन् गर्न सम्बन्धित निकायले पहल नगरेपछि लगानी डुब्ने खतराले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको एसयूएस कन्सट्रक्सनका सञ्चालक उत्सव ढकालले बताए । नदीको विषयमा राजनीतिकरण गर्न खोजेको आरोप लगाएका उनले सम्बन्धित निकायले पहल नगर्ने हो भने आफूहरुको लगानी फिर्ता हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।
अर्का लगानीकर्ता मित्र गोम्देनले उत्खनन् बन्द भएको विषयमा सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक जानकारी गराएर ज्ञापनपत्र बुझाए पनि सुनुवाई नभएको बताए । स्थानीय मजदुरहरुले निषेधित क्षेत्रमा समेत जथाभावी उत्खनन् गरिरहेको तर नगरले तोकिदिएको स्थानमा मापदण्डअनुसार उत्खनन् गर्दा विरोध गर्नु जायज नहुने उनको भनाइ छ ।
ठेक्का पाएको ४ महिना बित्दासमेत सम्बन्धित निकायले वातावरण नबनाउनु दुःखद भएको लगानीकर्ता विजय सेन्दाङले बताए । स्थानीयहरुको विरोधको कारण बन्द भएको उत्खनन् खुलाउन नगरपालिका तयार नहुने हो भने आफूहरुको लगानी फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न नगरपालिकालाई उनले आह्वान गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको लागि सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएअनुसार नदीजन्य सामग्री उत्खनन्का लागि गत असोज ८ गते नगरपालिकाले कन्स्ट्रक्सनलाई दुई करोड ६१ लाख १० हजार ५०१ रुपैयाँमा ठेक्का दिएको थियो । कन्स्ट्रक्सनले गएको माघ ९ गतेदेखि उत्खनन् कार्य सुरु गरेको थियो ।
तर, उत्खनन् गरेको भोलिपल्ट नै अर्जुनधारा–१ को वडा कार्यालयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नेतृत्वमा तालाबन्दी गरेपछि उत्खनन् कार्य बन्द भएको थियो । मेसिनको प्रयोगबाट नदीजन्य सामग्री निकाल्दा खानेपानीको मुहान सुकेको, सिँचाइको लागि पानी नउठेको भन्दै नेकपा १ नम्बर वडा कमिटीले अहिलेसम्म तालाबन्दी गरिरहेको छ ।
यसैबीच, नगरपालिकाकोतर्फबाट अनुगमन र प्रवद्र्धनको कार्य भइ ठेकेदारहरुलाई उत्खनन्का लागि अख्तियारी प्रत्यायोजन गरी सकिएको अवस्थामा निम्तिएको समस्या समाधान गर्न शुक्रबार बोर्डको बैठक बोलाइएको स्थानीय सरकार प्रमुख हरिकुमार रानाले बताए ।
नगर अनुगमन उपसमितिकी संयोजक उपप्रमुख कमला खतिवडा आचार्य, जिल्ला प्रशासन कार्यालय विपद् व्यवस्थापन समिति, राजनीतिक दलका प्रमुख, सरोकारवाला संघ–संस्थाका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मीहरुलगायतको संयुक्त नेतृत्वमा बुधबार नदीजन्य सामग्री उत्खनन् स्थलको अनुगमन गरेको थियो ।
अनुगमनका क्रममा स्थानीयले गरेको उत्खनन् मेसिनको प्रयोगबाट भए जति नै भेटिएको थियो । उनीहरुले नगरले तोकेको स्थानभन्दा बाहिर र नदीको दुवै किनारबाट पनि ढुंगा, गिटी र बालुवा निकालिरहेका थिए ।